Kuleylka kuleylka ee saameynaya Yurub wuxuu ka tagayaa buuraha Alps baraf la’aan | Saadaasha Shabakadda
Sawir - Ruptly
Ku gudbaya kuleyl? Maaha wax ka yar. Waxaan haynaa maalmo yar tan iyo meelo badan oo Isbaanishka iyo Yurub ah meerkurida heerkulbeegyadu taabatay, xitaa way dhaaftay, 40 darajo Celsius. Waxay ku dhowdahay mid aad u kulul, laakiin ma aha oo kaliya magaalooyinka ama magaalooyinka, laakiin sidoo kale muuqaal dabiici ah oo qurux badan sida Alps.
Barafka ay tahay inuu buuxiyo buurahaaga dhakhso ayey u dhalaalaysaa agagaarka loo dalxiis tago ee Stelvio Glacier ee buuraha Talyaani.
Heerkulka ilaa 12 darajo Celsius, oo la duubay Axadii la soo dhaafay, Agoosto 6, 2017, buuraha buuraha Alps ee Talyaaniga waxaa ka dhammaanaya baraf ku dhow. Saldhigga Stelvio Glacier wuxuu umuuqdaa nolol la’aanIyadoo gawaarida fiilooyinka laga tagay, oo aan micno lahayn, barafka xaaladahaas oo kale waa mid aad khatar u ah sidoo kalena dhib badan, sidaa darteed waxaa lagu qasbay inay xiraan waqti aan la cayimin.
Sida aad ku arki karto fiidiyowga, oo ay duubtay diyaarad duuliye ah oo ku rakiban kamarad, maxaa noqon kara muuqaal cad wuxuu noqday cirro ama madow. Waxaa jira baraf keliya meelaha ugu sarreeya, umana muuqato inay halkaas sii joogi doonaan muddo dheer.
Mawjadda kuleylka ayaa ah mid ba'an, waana sababta ay ugu bixiyeen naanaysta: arooryadow. Isbaanishka, 31 gobol waxay gaareen ama gaarayaan heerkul gaaraya 40 darajo Celsius ama ka badan, in kastoo aysan ahayn wadanka kaliya ee ay saameysay dhacdadan aadka u ba'an: Romania, Croatia iyo Serbia ayaa sidoo kale isku dayaya inay la qabsadaan balanqaadyada inay noqon doonaan mowjad kuleyl lama iloobaan ah, sida la sheegay ABC News.
Goorma ayaa la dhammayn doonaa? Goor dhaw. Maalmo yar ka dib heer kulka ayaa caadi ku soo noqon doona waqtigan sanadka. Xaaladda gaarka ah ee Spain, kuwa kaliya ee ku haray digniinta jaallaha ah waa Gran Canaria iyo Fuerteventura, sida laga soo xigtay AEMET, laakiin waxaa lafilayaa in usbuuca markuu dhaafo, meerkurigu calaamado heerkul wanaagsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Mawjadaha kuleylka » Kuleylka kuleylka ee Yurub wuxuu ka tagayaa buuraha Alps baraf la’aan